Quunnamtii gabateewwan lama gidduu jiru moggaasuuf fi gulaaluuf si gargaara.
Filannoon haaromsi fi haqii kan jiraatu yoo isaan kuusdeetaa fayyadamne gargaaramee dha.
Yoo quunnamtii haaraa uumte, gabatee tokko saanduqa makaa keessaa gara gubbaa qaaqatii filu dandeessa.
Yoo qaaqa Quunnamtiilee bante Quunnamtiilee foddaa keessatti walquunnamtii jiru lama cuqaasuun, san booda quunnamtiin gabatee keessa jiru fooyyeessuu hin dandeessu.
Furtuu dirreewwanii quunnamtiif moggaasa.
Maqaan gabateewwan filaman akka maqaa tarjaatti asitti mul'atu. Yoo dirree cuqaaste, gabatee irraa dirree filuuf xiyya qabuu fayyadamuu dandeessa. Quunnamtiin hundi tarree dhaan barreeffama.
Asitti filannoo filuu dandeessa yoo jijjiiramni furtuu dursaa irratti jiraate.
Gochaan hin jiru
Jijjiiramni kamiyyuu furtuu dursaa irratti adeemsiifame furtuuwwan alaantoo biraa miidhuu hin danda'u.
Dirreewwan furtuu alaantoo hunda haaromsa yoo walgitni furtuu dursaa haarome (Haaromsa Tarreeffamaa).
Yoo furtuun dursaa walgitaa haaroman, filannoo "IS NULL" jedhu fayyadamuun gatii isaa dirree furtuu alaantootti sirreessuuf. IS NULL jechuun dirreen duuwwaa dha jechuu dha.
Yoo furtuun dursaa walgitaa haaroman, filannoo gatii durtii jedhu fayyadamuun gatii isaa dirree furtuu alaantootti sirreessuuf. Yeroo uumama gabatee walgitaa, gatiin durtii kan furtuu alaantoo kan hiikamu yoo amaloota dirree moggastee dha.
Asitti filannoo yeroo furtuun dursaa haqame galtee fudhachuu danda'u filuu dandeessa.
Haqamuun furtuu dursaa galtee furtuu dirree alaantoo irratti akka hin qabne adda baasa.
Yoo furtuun dursaa haqame furtuun dirree alaantoo hundinuu ni haqamu.
Filannoo Tarreeffama Haqi jedhuun yoo furtuu dursaa haqte, galmeen hundi furtuu kana akka furtuu all records from other tables that have this key as their foreign key are also deleted. Use this option with great care; it is possible that a major portion of the database can be deleted.
Yoo furtuu dursaa walgitan haqte, gatiin "IS NULL" jedhu dirree furtuu alaantootti moggafama.
Yoo furtuu dursaa walgitan haqte, gatiin sirraa'e dirree furtuu alaantootti moggafama.